Andro voalohany: Ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny vokatra Apple | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | 21/06/2021 13:12 | Fitaovana IPhone, iPad
Iray amin'ireo andro andrasan'ny mpampiasa Amazon Prime rehetra, dia ny Prime Day, andro iray izay lasa roa taona lasa (toy ny nitranga tamin'ny Black Friday izay nitranga naharitra herinandro fa tsy iray andro fotsiny).
Mandritra ny anio sy rahampitso dia manana vokatra Apple maro be miaraka amina fihenam-bidy mahaliana izahay, fihenam-bidy izay tsy azontsika hadino raha miandry an'ity andro ity isika. Raha te hahalala ianao ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny vokatra Apple amin'ny andro voalohany, Manasa anao aho hamaky hatrany.
1.1 iPhone SE (2020) avy amin'ny 475 euro
1.2 iPhone 12 mini avy amin'ny 664 euro
1.3 iPhone 12 avy amin'ny 756 euro
1.4 iPhone 12 Pro hatramin'ny 1.099 euro
2.1 iPad mini 2019 amin'ny 404 euro
2.2 iPad Pro 2021 hatramin'ny 829 euro
2.3 Pencil Apple voalohany sy faharoa
2.4 Magic Keyboard 2020 avy amin'ny 279 euro
2.5 Logitech Combo Touch amin'ny vidiny 94 euro
3.1 Andiany 3 manomboka amin'ny 169 euro
3.2 Andiany 6 manomboka amin'ny 369 euro
4.1 AirPods Pro amin'ny vidin'ny 188 euro
4.2 AirPods amin'ny vidiny 129 euro
iPhone SE (2020) avy amin'ny 475 euro
Ny iPhone mora indrindra amidin'i Apple amin'ny fomba ofisialy dia ny iPhone SE, maodely misy Fampisehoana 4,7-inch misy ny famolavolana mitovy amin'ny iPhone 8.
Ny modely amin'ny 256 GB dia misy amin'ny 549 euro, ny kinova 128GB dia 10 euro mora kokoa noho ny kinova 256 GB raha ny maodely fidirana, ny kinova 64GB zara raha manolotra mahaliana antsika izany fihenam-bidy raha oharina amin'ny vidiny ofisialin'ny Apple Store: 475 euros.
iPhone 12 mini avy amin'ny 664 euro
Tamin'ny fahatongavan'ny iPhone 12, Apple dia nandefa ny maodely mini, maodely iray misy efijery 5,4-inch izay tsy nahitana fahombiazana izay nantenain'i Apple teny an-tsena (amin'ny resaka varotra), fa izany manana ny akany izy. Ity maodely ity dia manome antsika hery mitovy amin'ny maodely maodely iPhone 12.
Ny iPhone 12 mini ao amin'ny dikan-teniny 64 GB dia misy amin'ny 664 euro, raha ny kinovan'ny 128 GB mahatratra 749 euro. Azontsika atao koa ny mahita amin'ny tolotra ny 256 GB modely ho an'ny 849 euro.
iPhone 12 avy amin'ny 756 euro
Raha kely loatra ho anao ny iPhone 12 mini ho an'ny zava-drehetra, mandritra ny Prime Day, Amazon dia manome antsika ny iPhone 12 64 GB ho an'ny 756 euro. Version of 128 GB mahatratra 798 euro ary ny 256 GB maodely 908 euro.
iPhone 12 Pro hatramin'ny 1.099 euro
Raha te hankafy ny fiasa rehetra ianao IPhone matanjaka indrindra eny an-tsena, ny safidy tsara indrindra dia ny iPhone 12 Pro, maodely izay ao anatiny 128 GB dia misy amin'ny 1.099 euro.
Raha 128 GB dia lavo fohy, ny karazana 256 GB dia misy amin'ny 1.239 euro ary ny Ny kinova 512 GB dia mahatratra 1.509 euro.
iPad mini 2019 amin'ny 404 euro
Raha mitady iPad compact ianao dia tokony hijery ilay iPad mini. Ity maodely ity, izay natomboka teny an-tsena tamin'ny taona 2019, dia mifanaraka amin'ny Apple Pencil andiany voalohany, dia tantanan'ny processeur A12 Bionic ary mampiditra efijery 7,9-inch. eo anelanelan'ny anio sy rahampitso, azontsika atao ny mihazona ny v256 GB modely ho an'ny 490 euro fotsiny.
Raha ny maodely 256GB lehibe loatra aminao izany, safidy iray hafa hodinihina dia ny Dika 64 GB ho an'ny 404 euro.
iPad Pro 2021 hatramin'ny 829 euro
El iPad Pro 2021 miaraka amin'ny processeur M1 mifaninana mivantana amin'ny Mac an'ny orinasa iray ihany izy ary toa manondro fiverimberenan'ny ho avy izay avy amin'ny Apple nolavin'izy ireo hamafisina ny zava-drehetra. Ny maodely 11-inch, ao aminy 128 GB dia misy amin'ny 829 euro. Ity dika mitovy amin'ny ny fifandraisana data mobile dia nidina hatramin'ny 979 euro.
Ny kinova 256GB fitehirizana sy fifandraisana Wi-Fi dia azo vidiana amin'ny 932 euro. Ny ambiny modely tsy manana fihenam-bidy izy ireo, sahala amin'ny maodely 12,9-inch amin'ny 2021.
Pencil Apple voalohany sy faharoa
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny iPad Pencil mifanentana na iPad Pro ianao dia tokony handinika ny fividianana Apple Pencil. Ity fitaovana ity dia misy amina kinova roa: ny taranaka 1 sy 2, modely izay Izy ireo dia mifanaraka amin'ny fitaovana iPad hafa.
El Apple Pencil taranaka faharoa, dia manana vidiny 99 euro mahazatra, na eo aza izany, anio sy rahampitso, tsy misy afatsy 67,25 euro ihany. Ny maodelin'ny generasi faha-2, mifanentana amin'ny 11-inch iPad Pro andiany faha-2 mandroso ary 12,9-inch iPad Pro ny taranaka faha-3 mandroso, dia azo vidiana amin'ny 111,50 euro, raha 135 euro ny vidiny mahazatra.
Ny Apple Pencil mora vidy dia antsoina hoe Crayon ary nataon'i Logitech. Ity fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny iPad 2019 rehetra sy ny maodely taty aoriana (tsy ny iPad Pro) ary dia azo vidiana amin'ny 50 euro.
Magic Keyboard 2020 avy amin'ny 279 euro
Tamin'ny fanombohan'ny iPad Pro 2021, dia nanavao ny Magic Keyboard i Apple mba hanitsiana azy amin'ny hatevin'ny vaovao an'ity modely ity, izay nitombo 5 mm, na dia tsy dia tsikaritra loatra aza ny fahasamihafana. The Magic Keyboard navoakan'i Apple tamin'ny taona 2020 for IPad Pro 12,9-inch dia misy amin'ny Amazon eo amin'ny 273 euro fotsiny.
Ny vaovao Magic Keyboard ho an'ny iPad Pro Generation faha-5 (2021) 12,9-inch no misy amin'ny vidiny mitovy amin'ny Apple Store: 399 euro (Na dia tsy misy io raha tsy amin'ny 13 Jolay). Ity modely ity dia mifanentana amin'ny fitendry sy ny iPad Pro tonga lafatra, tsy tahaka ny maodely 2020, na dia mila mijery akaiky aza ianao mba hahamarika azy.
El Magic Keyboard ho an'ny iPad Pro 2021 mirefy 11-inch, tsy misy fihenam-bidy izany, satria ny hatevin'ity maodely ity dia mbola mitovy amin'ny maodely tamin'ny taon-dasa, satria ny tabilao dia tsy mitovy amin'ny maodely 12,9-inch (miniLED) tamin'ny 2021.
Logitech Combo Touch amin'ny vidiny 94 euro
Kitendry iPad mora vidy amin'ny Amazon anefa no be mpitia Ny 99% amin'izy ireo dia tsy misy ilana azy mihitsy raha ny tanjonao dia ny manoratra ora maro miaraka amin'ity fitaovana ity.
Safidy tena mahaliana raha jerena, hitantsika ao amin'ny Logitech Como Touch, fitendry izay mampiditra Trackpad, layout QWERTY ihany koa, mifanaraka amin'ny IPad taranaka faha-7 ary inona izany misy amin'ny 94,39 euro.
Ity modely ity dia azo alaina ho an'ny iPad Pro 2021 amin'ny vidiny 229 euro, maha-a safidy tsara indrindra amin'ny Magic Keyboard, na dia tsy amidy aza io andro io.
Andiany 3 manomboka amin'ny 169 euro
Raha 169 euro fotsiny no ahitantsika ny Apple Watch Series 3, fitaovana iray toa hajanona amin'ny WatchOS 8, saingy amin'ny farany dia tsy ho toy izany, ka raha tsy te handany vola be amin'ny Apple Watch voalohany ianao dia afaka manao izany Modely 38 mm amin'ny vidiny 169 euro fotsiny.
Raha kely loatra ho anao ny maodely 38mm, ny Modely 42mm (ny lehibe indrindra atolotry ny Apple ho an'ity maodely ity) amin'ny vidiny 199 euro.
Andiany 6 manomboka amin'ny 369 euro
Ho an'ny marina 389 euros, azonao atao ny misafidy ny maodely Apple Watch Series 6 misy GPS sy 44mm, maodely misy tratra aliminioma sy fehy silikola. Ny maodely 40mm dia azo amidy ihany koa 369 euros.
Atolotra ihany koa ny modely misy fifandraisana data. Ny 6mm Series 40 misy angona finday dia azo vidiana amin'ny 418 euro raha ny Fampivoarana 44 mm dia tafakatra 459 euro.
Apple Watch Series 6 dia mampiditra a metatra oxygen oxygen ary ho fanampin'izany, mamela antsika hifehezana ny taham-pon'ny fontsika amin'ny alàlan'ny fiasan'ny electrocardiogram izay ampidirin'ity modely ity amin'ny Series 4. Ho fanampin'izany, ahafahantsika manamboatra ny efijery mba hahitana azy foana.
AirPods Pro amin'ny vidin'ny 188 euro
Raha miandry ity andro ity ianao hanararaotra ny tolotra AirPods dia tonga ny andronao. Iray amin'ireo tolotra tsara indrindra azontsika jerena amin'ny Amazon, hitantsika izany ao amin'ny AirPods Pro, headphone tsy misy tariby Apple miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba azo alaina 188 euros, saika 100 euro mora kokoa noho ny ao amin'ny Apple Store.
AirPods amin'ny vidiny 129 euro
Ny taranaka faharoa an'ny AirPods dia azo alaina ao amin'ny a vidiny tena mahaliana. Afaka mahita ny maodely izay isika ampiakarina amina 129 euro izany amin'ny tariby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Andro voalohany: fifanarahana tsara indrindra amin'ny vokatra Apple
Ny Anker tsara indrindra manolotra ho an'ny Amazon Prime Day